2. သင်၏ operating system နဲ့ကိုက်ညီကြောင်းကိုသင်၏ရှေးခယျြသောကူပွန်ဘို့အောက်ကခလုတ်တဦးကိုရှေးခယျြ ကျေးဇူးပြု..3. အဆိုပါပြန်လည်သုံးသပ် ကျေးဇူးပြု. LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန် သင့်ရဲ့ RPRID serial number ကို အသုံးပြု. activation code ကိုရယူပေါ်တွင်သင်၏ညွှန်ကြားချက်.** ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ: Should you haveacoupon for RescuePro Deluxe withaserial number that begins with RPRID-0305,
သင့်ရဲ့ကူပွန်အပေါ်ပုံနှိပ်ကြောင်းအဆိုပါနံပါတ်စဉ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းနှင့်မမှန်ကန်ထားပါတယ်.You will then need to provide your complete RPRID-0305 တစ်ဦးကိုအစားထိုးလက်ခံရရှိရန် SanDisk မှနံပါတ်စဉ်. **2. ရွေးချယ်ထားသောကူပွန်အောက်ကခလုတ်ကို、သင်၏ operating system အညီကို select ပေးပါ。3. အဆိုပါ RPRID serial number ကိုသုံးပါ、activation code ကိုရကျေးဇူးပြုပြီး。အဆိုပါရရှိရန်မည်သို့ LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန် ယင်းစစ်ဆေးပါ。
** အာရုံစိုက်：RPRID-0305သင်နှင့်အတူစတင် RescuePRO Deluxe တစ်ကူပွန်ရှိပါက、ဒါမှမဟုတ်နံပါတ်စဉ်ကွဲပြားခြားနားသည်、သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲသက်တမ်းကုန်သွားပြီ。ဒီဖြစ်ရပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်、http://www.sandisk.co.jp/about-sandisk/contact-us/ SanDisk မှဆက်သွယ်ပါ、မှန်ကန်သောအမှတ်စဉ်အရေအတွက်ကိုရရှိရန် ကျေးဇူးပြု.。
2. သင်၏ operating system များအတွက် button ကို select လုပ်ပါ ကျေးဇူးပြု.. ဒါဟာ button ကိုရွေးချယ်ထားဝယ်ယူအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတည်ရှိသည်.3. သင့်ရဲ့ serial number ကနေတဆင့်သင့်ရဲ့ activation code ကိုခံယူဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန် RPRID, အလည်အပတ် LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန်**မှတ်ချက် : RescuePro Deluxe အဘို့သင့်အကောင်းအားဖြင့်အစတစ်နံပါတ်စဉ်ရှိပါတယ်လျှင် RPRID-0305,
SanDisk ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်ပါ http://www.sandisk.com/about-sandisk/contact-us/ မှန်ကန်သောနံပါတ်စဉ်များအတွက်.
သင့်ရဲ့ကူပွန်အပေါ်ပုံနှိပ်သောနံပါတ်စဉ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းနှင့်မမှန်ကန်ထားပါတယ်. သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည် SanDisk သင့်ရဲ့နံပါတ်စဉ်ကိုငါပေးမည် RPRID-0305 တစ်ဦးကိုအစားထိုး serial number ကိုလက်ခံရရှိနိုင်ရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသော **2. သင်၏ operating system ကိုရှေးခယျြဖို့ခလုတ်အောက်တွင်တည်ရှိရွေးချယ်ထားကူပွန်တဦးကိုရွေးချယ်ပါ.3. Lea မှာ LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန် ညွှန်ကြားချက်က၎င်း၏အမှတ်စဉ်အရေအတွက်အားဖြင့်တစ်ဦး activation code ကိုရယူရန်အဘို့အ RPRID.** အာရုံစူးစိုက်မှု: သင်နှင့်အတူစတင်မယ့်အမှတ်စဉ်နံပါတ် RescuePro Deluxe များအတွက်ကူပွန်ရှိပါက RPRID-0305,
ကူပွန်အပေါ်ပုံနှိပ်နံပါတ်စဉ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းနှင့်မမှန်ကန်ထားပါတယ်.သင်သည်သင်၏နံပါတ်စဉ်အသိပေးသင့်ပါတယ် RPRID-0305 လုံးဝကအစားထိုး SanDisk. **2. သင်၏ operating system နှင့်တွေ့ဆုံဘို့ရွေးချယ်ထားကူပွန်အောက်ကခလုတ်များ၏တဦးတည်းကို select ပေးပါ.3. ယင်းစစ်ဆေးပါ LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန် activation code ကိုသင့်ရဲ့ RPRID serial number ရယူဘို့သင့်ညွှန်ကြားချက်.** ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ: သင်တစ်ဦးအမှတ်စဉ်နံပါတ် RescuePro Deluxe များအတွက်ဘောက်ချာခဲ့လျှင်, နှင့်RPRID-0305,
သငျသညျ SanDisk ဆက်သွယ်သင့် http://www.sandisk.com/about-sandisk/contact-us/ တစ်မှန်ကန်သောနံပါတ်စဉ်များအတွက်.
အဆိုပါနံပါတ်စဉ်, သင့်ရဲ့ဘောက်ချာပေါ်ပုံနှိပ်သော, သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းနှင့်မှားယွင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်.သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သင်၏အ RPRID ဖြည့်စွက်ပါလိမ့်မယ်-0305 ရှိုးများပေးရမညျ. SanDisk အစားထိုးအရေအတွက်ရရှိရန်. **2. ကနေသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှု Make、သင်၏ operating system တစ်ခုကိုရှေးခယျြဖို့သက်ဆိုင်ရာနှင့်အတူကူပွန်ကိုအောက်တွင် button。3. အဆိုပါ activation code ကိုရယူဖို့ Serial Number ကို အသုံးပြု. တဲ့အခါမှာ RPRID，သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်ဖို့ဆက်စပ်ကြည့်ပါ ကျေးဇူးပြု.LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန်。 ** ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ：သင်တစ်ဦးကူပွန် RescuePro Deluxe ရှိပါက，序列号以 RPRID-0305အစ,
http://www.sandisk.com/about-sandisk/contact-us/, SanDisk ကိုဆက်သွယ်ပါ，နိုင်ရန်အတွက်မှန်ကန်သောအမှတ်စဉ်အရေအတွက်ကိုရရှိရန်。
သငျသညျ SanDisk RPRID မှပေးဖို့လိုအပျ-0305 ပြီးပြည့်စုံသောနံပါတ်စဉ်နှင့်အတူစတင်，တစ်ဦးကိုအစားထိုး sequence ကိုအရေအတွက်အားရရှိရန်。**2. သင်အသုံးပြုနေသော operating system ကိုပေါ် မူတည်. ကူပွန်ကို select ဖို့အောက်ကခလုတ်တစ်ဦးကိုရွေးချယ်ပါ.3. သင့်ရဲ့နံပါတ်စဉ်ကို အသုံးပြု. activation code ကိုရရှိရန်မည်ကဲ့သို့အကြောင်း RPRID
LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန်ယင်းကိုသွားရောက်ဖတ်ရှုပါ.** ကိုလည်းကြည့်ပါ: သင်ရှိသည် RPRID-0305 သင်နှင့်အတူစတင်ကြောင်း RescuePro Deluxe အမှတ်စဉ်နံပါတ်များကိုတစ်ကူပွန်ရှိပါက, နိုင်ရန်အတွက်မှန်ကန်သောအမှတ်စဉ်အရေအတွက်ကိုရရှိရန်
http://www.sandisk.com/about-sandisk/contact-us/ သငျသညျ SanDisk ရဲ့ဆက်သွယ်သင့်.
အဆိုပါနံပါတ်စဉ်သည်သင်၏ကူပွန်အပေါ်ပုံနှိပ်ဖြစ်ပါတယ်မှာမမှန်ကန်ခွင့်ပြုချက်နံပါတ်တစ် sayonggi ကုန်ဆုံးနေသည်.
တစ်ဦးကွဲပြားခြားနား serial number ကိုလက်ခံရရှိနိုင်ရန်အတွက်, SanDisk ပေါ်တွင်သင်၏ RPRID-0305 သင့်အနေဖြင့်အပြည့်အဝနံပါတ်စဉ်ပေးရမညျ. **
2. သင်၏ operating system နဲ့ကိုက်ညီသောကူပွန်ရွေးချယ်မှုအောက်ကခလုတ်တဦးကိုရှေးခယျြ ကျေးဇူးပြု..3. အဆိုပါပြန်လည်သုံးသပ် ကျေးဇူးပြု. LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန် အဆိုပါနံပါတ်စဉ်နဲ့ activation code ကိုရရှိရန်မည်ကဲ့သို့ညွှန်ကြားချက်များအတွက် RPRID.** ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ: Se avete un coupon per RescuePro Deluxe con un numero di serie che inizia con RPRID-0305,
သငျသညျ SanDisk ရဲ့ဆက်သွယ်သင့် http://www.sandisk.com/about-sandisk/contact-us/ တစ်မှန်ကန်သောနံပါတ်စဉ်များအတွက်.
သင့်ရဲ့ကူပွန်အပေါ်ပုံနှိပ်ကြောင်းအဆိုပါနံပါတ်စဉ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းနှင့်မှန်ကန်သောမဟုတ်ပါဘူးထားပါတယ်.သငျသညျထို့နောက်ပြည့်စုံနံပါတ်စဉ်များကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မည် RPRID-0305 SanDisk အစားထိုးလက်ခံရရှိရန်. **2. သင်ရွေးချယ်ထားသောကူပွန်အောက်ပေါ်လာသောခလုတ်တွေထဲမှာ, သင်၏ operating system နဲ့ကိုက်ညီသော button ကို Select လုပ်ပါ.3. အဆိုပါရည်ညွှန်းကိုးကား LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန် activation code ကိုများအတွက်ညွှန်ကြားချက်ကြည့်ဖို့ သင့်ရဲ့နံပါတ်စဉ်မှတဆင့် RPRID.** ** မှတ်ချက်: သငျသညျနံပါတ်စဉ်ကစတင်ခဲ့သည် RescuePro Deluxe များအတွက်ကူပွန်ရှိပါက- RPRID-0305,
သင့်လျော်သောနံပါတ်စဉ်များအတွက်. http://www.sandisk.com/about-sandisk/contact-us/ ထိုအခါ, သင်ကနံပါတ်စဉ်များကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မည် RPRID-0305 သင့်ရဲ့ SanDisk မှပြီးပြည့်စုံနေတဲ့အစားထိုး. **2. ကြေးဇူးပွုပွီး, ရွေးချယ်ထားသောကူပွန်ကလစ်အောက်မှာ, သင်၏ operating system မှသင့်လျော်သော.3. ကြေးဇူးပွုပွီး, အဆိုပါဖတ်ပါ LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန် တစ်နံပါတ်စဉ်ကို အသုံးပြု. activation code ကိုရရှိရန်မည်ကဲ့သို့ညွှန်ကြားချက်များအတွက် RPRID.** ကြေးဇူးပွုပွီး, စိတ်ကိုထား: RescuePro Deluxe အဘို့သင့်ကူပွန်အဆိုပါနံပါတ်စဉ်များပါဝင်သည်ဆိုပါက, အတူစတင် RPRID-0305,
သငျသညျ SanDisk ရဲ့ကုမ္ပဏီကိုဆက်သွယ်ပါရန်လိုအပ်ပါတယ် http://www.sandisk.com/about-sandisk/contact-us/ မှန်ကန်သောအမှတ်စဉ်အရေအတွက်ကိုရရှိရန်.သင့်ရဲ့ကူပွန်နံပါတ်စဉ်အပေါ်ပုံနှိပ်မမှန်ကန်, ထိုသို့သက်တမ်းကုန်သွားပြီ.
သငျသညျ SanDisk တစ်ခုလုံးရဲ့ serial number များကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်, RPRID နှင့်အတူစတင်-0305 , အစားထိုးမရ။ **
2. သင်၏ operating system နှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြောင်းရွေးချယ်ထားသောဘောက်ချာအောက်ကခလုတ်များ၏တဦးတည်းကို select ပေးပါ.3. စစ်ဆေးပါ LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန် အဆိုပါအတိုကောက်ကုဒ်တွေနဲ့စတင်ကြောင်းကိုသင်၏ serial number ကို အသုံးပြု. activation ရတဲ့အပေါ်ညွှန်ကြားချက် RPRID.** ကြောင်း Rajji မှတ်ချက်: သငျသညျ program တစ်ခု RescuePro Deluxe ဘောက်ချာနှင့်နံပါတ်စဉ်ရှိပါက RPRID နှင့်အတူစတင်-0305,
သင်က SanDisk က်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်ကုမ္ပဏီဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် http://www.sandisk.com/about-sandisk/contact-us/ မှန်တဲ့နံပါတ်စဉ်အရ.
သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည် RPRID နှင့်အတူစတင်ကြောင်းအပြည့်အဝ serial number များကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်-0305 တစ်ဦးကိုအစားထိုးဘို့ကုမ္ပဏီမှ SanDisk. **2. ကြေးဇူးပွုပွီး, သင်၏ operating system နဲ့ကိုက်ညီကြောင်းကိုသင်၏ရွေးချယ်ထားသည့်ကူပွန်ဖို့အောက်ကခလုတ်တဦးကိုရှေးခယျြ.3. အဆိုပါပြန်လည်သုံးသပ် ကျေးဇူးပြု. LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန် သင့်ရဲ့နံပါတ်စဉ်ကို အသုံးပြု. activation code ကိုရရှိရန်မည်ကဲ့သို့အပေါ်သူ၏ညွှန်ကြားချက် RPRID.** စိတျထဲမှာသိမ်းဆည်းထားပါ: အတူစတင်မယ့်အမှတ်စဉ်နံပါတ် RescuePro Deluxe များအတွက်ကူပွန်ရှိရမည် RPRID-0305,
သင့်ရဲ့ကူပွန်အပေါ်ပုံနှိပ်နံပါတ်စဉ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းနှင့်မမှန်ကန်ထားပါတယ်.သင်သည်သင်၏နံပါတ်စဉ်လိုအပ်ပါလိမ့်မည် RPRID-0305 SanDisk တစ်ဦးပြည့်စုံကိုအစားထိုးလက်ခံရရှိရန်. **2. သင်၏ operating system နဲ့ကိုက်ညီတရွေးဖို့အောက်ကသင်၏ရှေးခယျြသောကူပွန်ခလုတ်ကို။3. ဆန်းစစ်ခြင်း LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန် သင့်ရဲ့ RPRID serial number ကို အသုံးပြု. activation code ကိုရယူရန်သင့်ညွှန်ကြားချက်။** ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ: आप एक सीरियल नंबर उस के साथ शुरू होता है के साथ RescuePro डिलक्स के लिए एक कूपन है चाहिए RPRID-0305,
သငျသညျ SanDisk ရဲ့ဆက်သွယ်သင့် http://www.sandisk.com/about-sandisk/contact-us/ တစ်မှန်ကန်သော serial number သည်။
ကျော်နဲ့မှားသွားတယ်သောကူပွန်အပေါ်ပုံနှိပ်ကြောင်း serial number ကို။သငျသညျ SanDisk ငါ့အပြည့်အဝ RPRID ရှိ-0305 serial နံပါတ်တွေအစားထိုးရနျလိုအပျပါလိမ့်မယ်။ **
ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဆော့ဖျဝဲကို install ကျေးဇူးပြု., သင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ် run တဲ့အခါမှာ, သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်တောင်းပါလိမ့်မယ် , သင့်ရဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကိုသက်ဝင်စေဖို့. သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ပေးသောနေသော activation page ကို link တစ်ခုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်. လင့်ခ်အတိုင်းလိုက်နာခြင်းနှင့်ပုံစံဖြည့်စွက်ပေးပါ, သင့်ရဲ့ serial number RescuePRO®ဆော့ဖ်ဝဲကိုသင့်ရဲ့အခမဲ့မိတ္တူကိုသက်ဝင်စေဖို့င်သင့်တယ်. သက်ဝင်များအတွက်ခြေလှမ်း-by-step ညွှန်ကြားချက်များအတွက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ.
ကွန်ပျူတာပါလျှင်, တပ်ဆင်ပေါ်တွင်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မဟုတ်ပါဘူး, သင်သည်သင်၏ activation တောင်းဆိုမှုကိုအရေအတွက်ကိုRescuePRO®ပံ့ပိုးမှု E-mail ကိုကယျတငျနိုငျ, ကျနော်တို့ရရှိနိုင် activation code ကိုထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်.
ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်, အောက်ကခလုတ်မှသင်၏ operating system ကို select ပြီးသင့် operating system များအတွက်အဆက်အသွယ်ပုံစံကိုသွား ကျေးဇူးပြု. . သို့မဟုတ်တနည်း, ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါ (အမေရိကန်) တာဝန်ခံအခမဲ့ (866) 603-2195, သို့မဟုတ်ဒေသအလိုက် (727) 449-0891. ဥရောပဖုန်းများအတွက်: +44 (0) 115 704 3306
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဆော့ဖ်ဝဲကိုထည့်သွင်းပေးပါ, သင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ် run တဲ့အခါမှာ, သငျသညျဆော့ဖ်ဝဲကိုသက်ဝင်ဖို့တောင်းပါလိမ့်မည်. သင့်အနေ activation page ကို link တစ်ခုပေးအပ်ပါလိမ့်မည်. လင့်ခ်အတိုင်းလိုက်နာခြင်းနှင့်ပုံစံဖြည့်စွက်ပေးပါ, ဆော့ဖ်ဝဲသင့်ရဲ့အခမဲ့မိတ္တူကိုသက်ဝင်စေဖို့အမှတ်စဉ်နံပါတ်ကိုထည့်သွင်းရန်သေချာစေပါRescuePRO®. activation များအတွက်ခြေလှမ်း-by-step လမ်းညွှန်များအတွက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ.
သင်တို့အပေါ်မှာ install လုပ်နေကြတယ်ကွန်ပျူတာကိုအင်တာနက်ချိတ်ဆက်မပါလျှင်, သငျသညျကို Activation တောင်းဆိုချက်အရထောက်ပံ့ပေးရန်RescuePRO®သင့်ရဲ့အရေအတွက်ကပေးပို့နိုင်ပါတယ်, ကျနော်တို့အနေနဲ့ activation code ကိုပေးနိုင်ပါသည်.
ထိတှေ့, အောက်ကခလုတ်ကနေ operating system ကိုရှေးခယျြနှင့် operating system ကိုများအတွက်ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျပုံစံတွေနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက် ကျေးဇူးပြု.. သို့မဟုတ်, တနည်း, မခေါ်ကျေးဇူးပြုပြီး (အမေရိကန်) အခွန် (866) 603-2195, ဒေသအလိုက် (727) 449-0891. ဥရောပကိုခေါ် +44 (0) 115 704 3306